China Octyldecyl dimethylamines, CAS NO.7378-99-6,1120-24-7, ụlọ ọrụ DMA810 na ndị nrụpụta | Kerui Chemicals
Aha ahia: DMA810
Njirimara na ojiji:
Octyl decyl dimethyl amine amine (octyl decyl amine amine, DMA810) bụ isi ihe eji emepụta nnu cmonic quaternary ammonium, nke enwere ike imeghachi ya na benzyl chloride iji mepụta nnu benzyl quaternary ammonium.
Octyl decyl dimethyl amine amine (octyl decyl amine amine, DMA810) nwere ike imeghachi omume na ihe eji eme ihe dika methyl chloride, dimethyl sulfate, diethyl sulfate, wdg. Iji mepụta cationic quaternary ammonium.
Octyl decyl dimethyl nke atọ amine (octyl decyl tertiary amine, DMA810) enwere ike imeghachi ya na sodium chloroacetate iji mepụta amphoteric surfactant betaine.
Octyl decyl dimethyl terneary amine (octyl decyl amine amine, DMA810) na-emeghachi omume na hydrogen peroxide iji mepụta amine oxide dị ka onye na-asụ ụfụfụ na ụfụfụ ụfụfụ.
Ọdịnaya% nọ n'ọrụ
Mkpokọta amine uru%
Primary na Secondary Amines
Carbon yinye C8 + C10
Octyl decyl dimethyl amine amine (octyl decyl amine amine, DMA810) juru na ite igwe nke 160 kg / gbọmgbọm; echekwara n'ime ebe dị jụụ na ikuku n'ime ụlọ, na-echebe site na mmiri na ikpughe anyanwụ, oge nchekwa ahụ bụ ọnwa 12.
Octyl decyl dimethyl amine amine (octyl decyl amine amine, DMA810) bụ ngwakọta kemịkalụ kemịkalụ. Biko zere ịkpọtụrụ anya na anụ ahụ n'oge eji. Ọ bụrụ na enwere onye ana-akpọ, biko sachaa mmiri buru ibu zigara ya onye dọkịta ka ọ gwọọ gị.